Mashiinka Boorsada, Mashiinka maaskaro, Mashiinka Daboolka Kabaha - Fangyong
Xawaaraha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ...
Mashiinka Samaynta Gacmo gashi TPE
XT350 Mashiinka Samaynta Daboolka Kabaha
Double Line Mashiinka Samaynta Bacda Qashinka Aan Xadhkaha Ahayn
YM480 Mashiinka Mashiinka Kumbuyuutarka
DFR380 Mashiinka Bacda Samaynta Bag Labaad Khadad T-shaati ah
Mashiinka Samaynta Boorsada Ubaxa
Mashiinka qaadashada bacda Dhar
LM1300 Mashiinka Mashiinka Nadiifinta
CLFQ1300 Mashiinka Kala Bixinta Dusha Sare
Mashiinka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ah ee GSFQ1300A
WF1600 Non-tolmo wanaagsan leh mashiinka jeexa
Mashiinka Mashiinka Boorsada Ey Toos ah
DRQ600-1000 Heat Jarida Side Mashiinka Mashiinka
YTG600-1300 Mashiinka Daabacaadda Flexo
Mashiinka Xarigga ee ZF350
HZ300 Mashiinka Xiritaanka Xawaaraha Sare
Mashiinka Goynta QD350
LH500 Paper Mashiinka Goynta Core
YTZ600-1300 Mashiinka Daabacaadda Flexo
ZUA400-600 Mashiinka Samaynta Bacda Saddex Dhinac ah
GM1100-1900 Xawaare Xawaare Xaashida Xaashida Xawaaraha Sare ...
masax mashiinka samaynta bacda qashinka
Warshadda Mashiinka Ruian Fangyong waa soo saare xirfadle ah mashiinnada baakadaha caagga ah sida mashiinka samaynta bacda qashinka, dhinaca mashiinka bacda wax lagu xiro ee hoose, mashiinka bacda samaynta, mashiinka sameynta maaskaro wajiga, mashiinka qaadashada gacmo gashi, mashiinka daboolka kabaha, mashiinka daboolka qubayska, jeexjeexa mashiinka dib loo jaro, mashiinka jarista iyo mashiinada kale ee qaraabada ah.
Waxaan joognaa Ruian, Wenzhou City, gobolka Zhejiang oo ah 1 saac duulimaad ka yimaada Shanghai ama 2 saac duulimaad ka yimaada Guangzhou.
Markaad isticmaaleyso mashiinka jeexjeexa wax soo saarka ...
Markaad isticmaaleyso mashiinka jeexjeexa wax soo saarka, habka jeexitaanka waa in fiiro gaar ah loo yeeshaa oo aan si fudud loo qaadan. Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu isku dari doonaa filimka iskudhafan ee BOPP / LDPE filimka iskudhafan, dhibaatooyinka tayada leh ee ka dhaca geedi socodka wax soo saarka dillaaca iyo dhibaatooyinka la xiriira mashiinka jeexjeexa si loo falanqeeyo. 1. Xakamee xawaaraha goynta markaad geleyso wax soo saarka caadiga ah ...
Markaad isticmaaleyso mashiinka jeexjeexa wax soo saarka, habka jeexitaanka waa in fiiro gaar ah loo yeeshaa oo aan si fudud loo qaadan. Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu isku dari doonaa iskudhafka isku dhafan ee 'BOPP / LDPE c ...
Heat xakamaynta heerkulka inta lagu jiro b ...
In geeddi-socodka samaynta bacda, mararka qaarkood shaabadaynta shandaddu ma fiicna. Wax soo saarka habkan loo soo saaray waa mid aan u qalmin. Maxaa sababa dhacdadan? Waa inaan fiiro gaar ah u leenahay magaabay kuleylka ...